माधव, तिमी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा किर्नोभै टाँस्सिरहेकै छौ । तिम्रो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् जुवाको खाल, भङ्ज्याहाको झुन्ड वा डकैतीको हिसाब नमिलेका डाँकाहरूको बगालतुल्य भएको छ । बैठकमा तिम्रा मन्त्रीहरू तिम्रै साक्षी-रोहबरमा हात हालाहाल गर्न तम्सिन्छन्, अशिष्ट वचनको वर्षा गर्छन् । तिमी मृतवत् मुद्रामा सुन्छौ र ट्वाँ परेर हेर्छौ । तिम्रो कुनै मन्त्री सिडिओलाई कुट्छ, कुनै मन्त्री कर्मचारीको भान्सेलाई लछार्छ, कुनै मन्त्री अनमिनलाई तथानाम भन्छ, कुनै मन्त्री तिम्रो आज्ञालाई लोप्पा ख्वाउँछ । यथार्थमा कुनै पनि मन्त्री तिमीलाई माखोबराबर गन्दैन । तर, तिमी लाचार छौ, आपना मन्त्रीलाई अदपकाइदामा राख्न सक्दैनौ । निकुञ्जमा लोक्ता बटुल्न गएका दलित नारीहरू सैनिक जवानका हातबाट पक्राउ पर्छन्, बलात्कृत हुन्छन् र गोली ठोकिन्छन् । तिम्रो पार्टीकी खुस्केट महिलामन्त्री गोली चलाउँदै आइलाग्ने महिला सिकारीलाई जवानले जवाफी गोली हान्यो भनी सरासर झुठ बोल्छिन् । तिमी सुन्छौ र चुपचाप बस्छौ । तिम्रै पाटीका अर्का झल्ला मन्त्री भारत-पाक द्वन्द्वका कारण जमिम साह मारिए भनी अनर्गल बकबक गर्छन् । तिमी सुन्छौ र निहुरमुन्टी ‘न’ हुन्छौ । छाडा मन्त्रीलाई छिसिक्क छोए तिमीलाई आप\_mनो कुर्सी हल्लिने डर छ । त्यसैले माधव, कुर्सी जोगाउन प्रत्येक मन्त्रीलाई पञ्चखत माफी दिन तिमी अभिशप्त छौ । गए बरु सृष्टिमा पैरो जाओस् तर कुर्सी नजाओस् । तिम्रो अटल, अथक र अविराम चाहना यही छ । त्यसैले त तिमी माकुने हौ । माधव, कठोर तथ्य जे हो, हो त्यो त भनिनै पर्छ । व्यवहार र आचरणको ऐनामा हेर्दा तिम्रो मन्त्रिपरिषद् सत्तालिप्त सन्काहा, गुन्डा, लफंगा र दिमाग खुस्केकाहरूको जम्बोरी हो । र, हो यो उच्छृङ्खलता र अराजकता, लुट र दुराचारको प्रतीक पनि । तिम्रो बेलगाम मन्त्रिपरिषद्को सिको गर्दै चालकहरू सडकहीन सडकमा वाहन गुडाउन थालेका छन्, विद्यार्थीहरू एकाबिहानै डिस्को धाउन थालेका छन्, चिकित्सकहरू आपत्कालीन सेवासमेत बन्द गर्दै छन्, फौजी छाउनीमा जवान मारिँदा छन्, प्रहरी अधिकारीहरू अपराधमा मुछिँदा छन्, को, कुनवेला, कहाँ मारिने हो, केही ठेगान छैन । त्यसैले, आम जनमानसमा तनाब र भय व्याप्त छ । तर माधव, तिमी निश्चिन्त छौ, तिमी मग्नमस्त छौ । मानौँ कुर्सीको नशाले तिमी लठ्ठ छौ, तिमी इन्तु न चिन्तु छौ । सके तिम्रो कुर्सीप्रेमी परिभाषामा यो सार्वत्रिक अराजकता नै लोकतन्त्र, मर्यादा र सुरक्षाको द्योतक हो । माधव, सगरमाथाको फेदीबाट पाइला-पाइला गरी प्रकृतिका भयावह शक्तिहरूसित जुध्दै जो चुचुरोमा पुग्छ, उसलाई आरोहणको तीव्र पीडा र असीम आनन्द थाहा हुन्छ । कठोर यत्नबाट प्राप्त गरेको सगरमाथा विजयबाट ऊ मात्तिँदैन, पात्तिँदैन र उसले धरती छाड्दैन । तर, जो बोकिएर चुलीमा पुग्छ, ऊ मात्तिन्छ, पात्तिन्छ र उसले धरती छाड्छ । माधव, तिमी पछिल्लो काँटमा पर्छौ । मदन भण्डारी जीवित छउन्जेल तिमी उनका छायातुल्य कार्यकर्ता मानिन्थ्यौ । राजनीतिक सुझबुझ, कार्यनीतिक कौशल, बौद्धिक सामथ्र्य र वाक्पटुतामा तिम्रो गन्ती कतै थिएन । तिमी पेट्टी टेक्नोक्रयाट टाइपका व्यवस्थापक हौ भनी टाढाबाट मैले सुनेको थिएँ । मदन मारिए र एमालेको महासचिव पद अपुतालीमा तिमीलाई प्राप्त भयो । त्यही पदको भर्‍याङ चढेर तिमी नौमहिने शासनको उपप्रधानमन्त्री बन्यौ । र, तिमीलाई भ्रम भयो— म जे भएँ, आपनै बर्कत-बुताले भएँ । तिमीलाई म सगरमाथाको अन्तिम शिविरमा पुगेँ भन्ने लाग्यो, र तिमीमा सगरमाथाको चुचुरो टेक्दा प्रधानमन्त्री भइन्छ भन्ने उखर्माउलो लालसा जाग्यो ।
This entry was posted on March 25, 2010 at 1:36 am and is filed under बिभिन्न पत्रपत्रीका.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
lamakhule Says:	June 23, 2010 at 12:39 pm | Reply nepal lai aru 50 barsa pachhadi dhakelera itihans banaune haruwa haruko jhund le yo muluk aakrant huda pani hami nepali lai dukhena